Miarahaba anao Jagwar Misaotra anao tsy nisalasala niteny ahy tamin'ilay nanovako ny pejy vavolombelon'i Jehovah. Tsy vavolombelon’i Jehovah aho nefa itako tsy dia mahafinaritra loatra ny fomba nilazan'i Thelezifor ny mahakasika ny Vavolombelon’i Jehovah tao, tsy dia diso loatra akory ny sasany amin’ireo voalaza, ary itako tena niezaka izy nanao azy, fa amin’ny ankapobeny dia tsy ampy be dia be, tsy dia misy zavatra tsara koa voatantara, sady itako misy somary tsy mety ny fomba nilazana ny hevitra sasany. Ohatra hoe ny vavolombelon’I Jehovah nipoitra avy amin’ny protestantisma sy ny adventisma dia tsy marina. Ny eo ambany lohateny hoe:”finoan’ny vavolombelon’I Jehovah” koa tompoko dia marobe koa no tokon’ny ahitsy sy ampiana. Na iza na iza vavolombelon’i Jehovah malagasy hamaky anazy io izay mihoatra ny 138 470 , dia tsy ho faly na oviana na oviana amin’izany fomba firesaka toy ny misy fankahalana izany. Izay tsy miresaka afatsy ny lafiratsiny. Ary mety haniry hanova io fomba filaza io daholo. Handray anjara ao amin’ny Wikipedia. Raha te ahalala ny momba ahy sy ny tantarako ianao, dia iza no tsaratsara kokoa anontanianao mahakasika izany ? Tsy iza fa tsy maintsy ny tenako ihany. Raha tsy tia ahy ianao na amin’ny olona tsy tia ahy no angalanao hevitra dia mety ho ny zavatra ratsy mahakasika ahy ihany no azonao sy voatantaranao. Raha te-ahalala momba ny vavolombelon’I Jehovah àry ianao, anisan’izany ny tantarany na ny finoany, dia iza no tsaratsara kokoa afaka hanome valiny mahafa-po? tsy iza fa ny vavolombelon’I Jehovah ihany sa tsy izany? Avy amin’ny bokiny izany fa tsy ny avy amin’ny boky hafa na teny inona izany na teny inona. Ny tantaran’ny vavolombelon’i Jehovah nalaiko dia tao anatin’ny boky misy tantaran’ny vavolombelon’i Jehovah, mitondra ny lohateny hoe: “Vavolombelon’i Jehovah, mpitory ny fanjakan’Andriamanitra”, misy pejy 750, natonta tamin’ny 2005, nanomboka tamin’ny pejy faha 42 hatramin’ny pejy faha 119 no nangalako hevitra. Ny finoan’ny vavolombelon’i Jehovah dia nalaiko tamin’ny boky: “Ny Vavolombelon’i Jehovah—Iza moa Izy Ireo? Inona no Inoany? Natao printy tamin’ny 2011, pejy faha 12 hatramin’ny pejy faha 14 no nalaiko, sy ny boky “Fandresen-dahatra”, natao printy tamin’ny 2011, pejy faha 407 hatramin’ny pejy faha 415. Ireo antontan’isa dia nalaiko avy amin’ny Diarin’ny Vavolombelon’I Jehovah natao printy tamin’ny Janoary 2017, pejy faha 177 hatramin’ny pejy faha 192. Nosoratan’ny vavolombelon’i Jehovah(Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Wallkill, New York, U.S.A) daholo ireo, Ny sary dia nataoko copie avy amin’ny www.jw.org, sary nahazahoan-dalana daholo, izay tsy an’iza fa tranokalan’ny Vavolombelon’i Jehovah ihany, nikirizako ary tao anatin’ny andro maromaro no nanaovako azy, nataoko tao anaty fichier word ny sasany avy eo nataoko copie tao amin’ny Wikipedia. Ny mahakasika ny hoe avy amin’ny jw.org ireo teny nolazaiko dia mety marina satria ireo boky notanisaiko ireo dia hita ao amin’ny www.jw.org ny sasany ary ao amin’ny wol.jw.org ny sasany ary mety ho hita any amin’ny site hafa koa toy ny watchtowerwayback.org ny sary sy ny boky hafa. Nataoko io mba ho feno kokoa ny fanazavana mahakasika ny vavolombelon’i Jehovah fa tsy ireo zavatra ratsy ihany no noresahina mba hanomezana fahafahampo ny Malagasy indrindra ireo vavolombelon’I Jehovah sy ireo mianatra aminy izay tena mazoto amin’ny fanaovana fikarohana amin’ny internet amin’izao andro izao. Ny ankabeazan’ireo voalazan'i Thelezifor mahakasika ny vavolombelon’I Jehovah dia voalaza ao amin’ilay hevitra vaovao nataoko ihany fa nalamina, natao mazava tsara fotsiny, sady natao feno kokoa ny fanazavana. Ka tsy ny ratsy ihany no voaresaka fa ny tsara koa. Ka tsy haiko raha mahazo rariny aho amin’izany, mbola tokon’ny hanohy izy iny aho, anisan’izany ny famenoana ny bibliographies sy ny rohy hafa fa mbola tsy vitako ilay izy. Raisiko foana aloha ny sosokevitra sy ny fanakianana fa tiako kokoa raha ny tombotsoan’ny maro no jerena. Izay mety no atao. Misaotra indrindra tompoko.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinika_amin%27ny_mpikambana:Jagwar&oldid=809542"
Voaova farany tamin'ny 26 Desambra 2017 amin'ny 21:30 ity pejy ity